कति छ पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति ? (विवरणसहित) - Suvham News
कति छ पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति ? (विवरणसहित)
सरकारले पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको भौतिक सम्पत्ति खोजबिनको क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । पूर्व राजपरिवारको भौतिक सम्पत्तिलाई मुलुक र जनताको हितका लागि प्रयोग गर्न सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालय मार्फत खोजबिन कार्यलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
ट्रष्टका सहसचिव प्रज्ज्वल शर्मा अर्यालका अनुसार हालसम्म २२ हजार ५१८ रोपनी जग्गा ट्रष्टको स्वामित्वमा आइसकेको छ । चालु आवमा पनि जग्गा खोजबिनको काम जारी रहेका कारण थप जग्गा प्राप्त हुने विश्वास लिइएको अर्यालले जनाए । धादिङ र नुवाकोटमा क्रमशः १५ हजार २७३ र १३ रोपनी थप जग्गा प्राप्त भएको सहसचिव अर्यालको भनाइ रहेको छ । यस्तै ट्रष्टको स्वामित्वमा हालसम्म विभिन्न बैंकमा २७ करोड ४५ लाख ५४ हजार नगद मौज्दात रहेको पाइएको छ । ट्रष्टको नाममा नबिल बैंक लिमिटेड, होटल डेला अन्नपूर्ण र नेपाल औद्योगिक विकास निगममा गरी हालसम्म एक लाख ८१ हजार ९४२ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यसमध्ये नबिल बैंकको एक लाख ४४ हजार ४७२ कित्ता, निगमको छ हजार ७५० कित्ता, होटल अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता सेयर रहेको छ ।
यसैगरी ट्रष्टको मातहत ल्याइएको जग्गा उपभोगसम्बन्धी गुरुयोजना तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र केही समयभित्रै त्यसले पूर्णता पाउने जानकारी दिँदै सहसचिव अर्यालले हालसम्म ललितपुर, चितवन, हेटौँडामा सघन रुपमा सम्पत्ति खोजबिन अभियान नै सञ्चालन गरिएको तथा पोखरामा सार्वजनिक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको बताए । गत मङ्सिरमा ललितपुरमा सञ्चालन गरिएको सघन सम्पत्ति खोजबिन कार्यक्रममा गौदामचौर–१ मा वडामहारानी नारायणहिटी गुठीको नाममा आठ रोपनी १० आना तीन पैसा जग्गा भेटिएको अर्यालले जनाए ।
Prevगोमाको विमानसँग चरा ठोकियो, उडान अवरुद्ध
Nextडेपुटी गभर्नरमा चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ